Iindaba-Iingcebiso zokuNxitywa imaski yobuso bemihla ngemihla
Landela la manyathelo ukuze unxibe, ukhulule kwaye unxibe imaski yobuso ye-3M yemihla ngemihla. IiMaski zobuso bemihla ngemihla zifanelekile ukunxitywa kwemihla ngemihla kwiindawo zikawonke-wonke, zihlamba izandla kwaye zisebenziseka kwakhona ngexabiso elihlala ixesha elide.Imaski yethu yobuso belaphu engeyiyo eyezonyango inemigangatho emibini yelaphu lomqhaphu, iilophu zendlebe ezihlengahlengiswayo kunye nekliphu yempumlo eyenzelwe ukuthuthuzela.
Iingcebiso ekufuneka uzigcine engqondweni
Hlamba izandla zakho ngamanzi ashushu, anesepha imizuzwana engama-20 ngaphambi kokuba unxibe kwaye emva kokususa imaski yobuso bemihla ngemihla eyi-3M ukunqanda ukuhambisa naluphi na ukungcola okanye iintsholongwane kwimaski.Sebenzisa isicoci sesandla esinotywala obuyi-60% ubuncinci ukuba awukwazi ukuhlamba izandla zakho.
Qinisekisa ukuba imaski ikwimeko entle
Thatha imaski ngeelophu zendlebe kwaye uyihlole ngaphambi kokuba uyinxibe.Ukuba ubona nayiphi na imingxuma, iinyembezi okanye omnye umonakalo, yilahle kwaye usebenzise entsha ekwimeko efanelekileyo.
Musa ukucutha umcu wempumlo
Iimaski zobuso ze-3M zemihla ngemihla zinekliphu yempumlo ehlengahlengiswayo.Kunokuba ucinezele ikliphu yempumlo uvale, sebenzisa izandla zozibini ukugoba ikliphu yempumlo ukuze iphumle kakuhle empumlweni nasebusweni.
Ukhuseleko olupheleleyo lubalulekile
Imaski yakho kufuneka igqume impumlo yakho kunye nomlomo ngamaxesha onke, nokuba uhambisa umlomo okanye intloko.Imaski kufuneka iphumle kakuhle kwaye icocekile ebusweni bakho.
Nje ukuba ilayitiwe, yigcine
Ukuthatha imaski yobuso bakho uyivule kwaye uyivale kudala ithuba lokuba iintsholongwane zisasazeke - ukuya nokubuya emzimbeni wakho.Ngelixa usesidlangalaleni, musa ukutsalela imaski yakho ezantsi kwibhulorho yempumlo yakho okanye uyiyeke ijinga kwindlebe enye.Iimaski zisebenza kuphela njengomsebenzisi, ke zigcine ixesha elide njengoko ukunye nabanye.
Coca imaski yakho ngokukhawuleza kwaye ngokufanelekileyo
Iimaski zobuso bemihla ngemihla kufuneka zihlanjwe emva kokusetyenziswa ngakunye ukunceda ukunciphisa ukwanda kweentsholongwane.Hlamba izandla ezi maski ngamandla ngamanzi afudumeleyo ubuncinci imizuzu emi-5.Pula kwaye wome umoya.Iipakethi zethu ezininzi ezifanelekileyo zithetha ukuba uyakusetelwa ukuphuma okuninzi.
Bonisa inkathalo ngokunxiba imaski kwiindawo zikawonke-wonke.
Kunye nokungena eluntwini, ukunxiba imaski yobuso yindlela ebalulekileyo yokubonisa ukuba uyayikhathalela impilo yoluntu lwakho.IiMaski zobuso be-3M zemihla ngemihla lukhetho olukhulu lokuhamba ngexesha lemisebenzi yemihla ngemihla efana nokusebenza, ukuthenga kunye nokonwaba. Ulwazi ngoKhuseleko oluBalulekileyo:Ukuba uneemeko zempilo ezifana ne-asthma, iimeko zentliziyo okanye iimeko zokuphefumla, kufuneka udibane nomboneleli wakho wezempilo (ugqirha) ngaphambi kokusetyenziswa.
Iimveliso ezishushu - Imephu yesiza - AMP Mobile Imaski ekhuselayo yaseTshayina, Imaski yobuso, Imaski yePPE, Imaski yaseTshayina, FFP2 Isiphefumlo, Pharmacy Surgical Mask,